Faah faahin: Qaraxyo is xigxigay oo ruxay deegaanka Bacaadweyne | Dhacdo
Faah faahin: Qaraxyo is xigxigay oo ruxay deegaanka Bacaadweyne
Laba qarax oo is xigxigay ayaa xalay ka dhacay bannaanka hore ee deegaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug, iyadoona lagu burburiyay ceel biyood ay dadka deegaanka biyaha ka cabi jireen.
Ceelka la qarxiyay ayaa ku yaalay inta u dhaxeyso Bacaadweyne iyo tuulada Shabellow, kaasi oo muhiim u ahaa dadka deegaanka iyo xoolo dhaqatadaba.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyada oo ahaa kuwo is xigxigay si weyn looga maqlay deegaanka Bacaadweyne iyo tuulooyinka hoos-tagga.
Waxay kaloo sheegeen in qaraxyadaasi la maqlay, xilli uu aad u xadidnaa dhaqdhaqaaqa shacabka ku dhaqan Bacaadweyne iyo tuulooyinka ku teedsan, sababo ku aadan dadka oo baqdin wajahaayay muddooyinkii ugu dambeysay, ka dib markii Shabaabku ku soo xoogeysteen tuulooyinka ku dhow dhow Bacaadweyne.
Shabaabka ayaa daba-yaaqadii sanadkii hore ee 2020 bilaa dagaal kula wareegay gacan ku haynta tuulada Shabellow, ka dib markii dhawr jeer ay dadka deegaanka ku wada dagaalameen. Dadkii ku dhaqnaa Shabellow ayaana isaga barakacay.
Maleeshiyada Al Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeysay culeys weyn soo saaray Bacaadweyne, waxaana dhawr goor ka dhacay weeraro abaabulan oo ay ka gaysteen, oo kii ugu dambeeyay uu ahaa midkii 30-kii bishii November ka dhacay deegaankaasi, dad fara-badana ay ku dhinteen.
Ma cadda sababta loo bartilmaameedsaday ceel biyoodkan, waxaase loo fasirtay mid qayb ka ah culeyskii ay Shabaabku ku hayeen deegaanka Bacaadweyne.